Ogaden News Agency (ONA) – Ismariwaa Wali Ka Dhex Taagan Midowga Yurub & Britain.
Ismariwaa Wali Ka Dhex Taagan Midowga Yurub & Britain.
Baarlamaanka Midowga Yurub (EU) ayaa magaalada Strasbourg ugu codayn doonaa mooshin liddi ku ah qaabka ay UK u waddo wada xaajoodka ay uga baxayso Midowga Yurub.
Mooshinku waxa uu ugu baaqayaa UK in xilligan kala guurka ah ay ku toosnaato shuruucda Midowga Yurub looga baxo. Hogaamiyayaasha Midowga Yurub ayaa la waydiisan doonaa inay dib u dhigaan go’aankooda ku aaddan in la furo wadahallada dhanka ganacsiga iyo xiriirka mustaqbalka, illaa laga gaaro heshiis weyn.
Codeynta maanta ayaa waxa ay fursad u tahay in ay dajiso xiisadda siyaasadeed, hasayeeshee xal buuxo ma keenayso, sababtoo ah xildhibaanada Midowga Yurub oo kaliya ayaa gaari kara go’aanka ugu dambeeya ee heshiiska Britain ay uga baxayso Midowga Yurub.